Project IGI Apk Download ho an'ny Android  | APKOLL
Hita amin'ny finday avo lenta izao ny Tetikasa andehanako (IGI). Azonao atao ny milalao ny lalao tsara indrindra, izay nilalao tamin'ny PC taloha. Project IGI Apk dia natao manokana ho an'ny fitaovana Android.
Manolotra ny endri-javatra mitovy amin'ny kinova PC izy rehetra. Izy io dia misy fiasa fanampiny ihany koa, izay hodinihintsika. Hizara ny momba ny kinova PC sy ny kinova Android izahay. Mijanona miaraka aminay fotsiny.
Topimaso momba ny Project IGI Apk
Amin'ny voalohany, handeha amin'ny dikan-PC isika. Ao amin'ny dikan-PC dia novolavolaina tamin'ny taona 2000, io no tsara indrindra tamin'izany fotoana izany ary ho ahy dia io no lalao tsara indrindra. Izaho manokana dia nandany ora maro tao amin'ny solosiko nilalao ny lalao ordinatera tena misy.
Taorian'ny nandrenesako ny vaovao momba ny dikan-Android dia io no tsy nampoizina tsara indrindra. Android izy io Action lalao. Izy io dia manome anao ireo endri-javatra mitovy, izay nampiasaina tamin'ny dikan-PC. Hahita mozika lafika mitovy ianao.
Izy io dia manolotra fitaovam-piadiana mitovy. Ho hitanao daholo izy ireo, ary hizara ny sasany amin'ireo fitaovam-piadiana aho. Ho hitanao amin'ity lalao ity. Zaraiko ny sasany fa tsy izy rehetra.
Ity misy lisitry ny fitaovam-piadiana.
LAL 80 XNUMX
Aorian'ny sary dia manome anao ny sary tsara indrindra. Ho hitanao fa malefaka ary mazava kokoa ny maso. Izy io koa dia manome anao fifehezana lehibe hanesorana ny fahavalo. Afaka mifehy ny fihetsikao ianao ary mikendry mora foana ny mpifanandrina aminao.
Ny iraka, ho hitanao eto ny iraka efatra ambin'ny folo. Ny iraka tsirairay dia manana zavatra hafa tokony ho vita. Ho hitanao fa mora kokoa ny mamita iraka amin'ny findainao raha oharina amin'ny PC. Ankafizo ity Lalao 3D miaraka amin'ny fanaraha-maso malefaka sy ny sary tsara indrindra.
Ny zavatra mahasosotra indrindra dia ny miala amin'ny iraka eo afovoan'ny filalaovana. Milalao ianao ary misy zavatra mipoitra tampoka, noho izany amin'ity lalao ity dia afaka mamonjy iraka amin'ny fotoana rehetra ianao. Azonao atao ny mitahiry azy ary manomboka milalao eo amin'ny toerana nialanao azy.
Endri-javatra lehibe an'ny Project IGI Apk
Izy io no iray amin'ny tsara indrindra Games, izay manana endri-javatra maro holazaina. Saingy hizara ireo endri-javatra izay tena tiako tamin'ity lalao ity aho. Azonao atao koa ny mizara ny traikefanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra. Aza misalasala mampiasa azy.
Sary tsara indrindra
Controllers tsara indrindra
Milamina ve ny milalao?
Eny, azo antoka ny fampiasana azy. Tsy mila fizotry ny fisoratana anarana na kaonty ianao. Aza adino ny mampiasa an'io lalao fampiharana io. Saingy tsy izahay no mpamorona an'ity fampiharana lalao ity. Noho izany tsy afaka manome anao antoka manokana momba ny fiarovana izahay.
Ahoana ny fampidinana ny Project IGI Apk?
Maimaimpoana ny misintona amin'ny tranokalanay. Manome rohy anao izahay hampidinana ity rindranasa ity. Mila mitendry ilay rohy fotsiny ianao ary miandry segondra vitsy mandra-pahatapitry ny fisintomana. Efa nosedraina ity lalao ity izahay ary manome rohy miasa ho anao, ka aza misalasala manapa-kevitra azy io.
Ahoana ny fametrahana ny tetikasa IGI Apk?
Mba hametrahana azy amin'ny fitaovanao dia mila manova toe-javatra sasantsasany ianao. Izy io dia satria fampiharana fampiharana antoko fahatelo. Hizara ny fizotran'ny fametrahana amin'ireo dingana etsy ambany izahay. Azonao atao ny manaraka azy ireo ary afaka mametraka azy amin'ny fitaovana Android anao ianao.
Andraso segondra vitsy dia sokafy.
Project IGI Apk no rindrambaiko filokana Android tsara indrindra miaraka amin'ireo fiasa rehetra amin'ny kinova Pc. Milalaova sy mankafy mandany fotoana kalitao amin'izany.
Ho an'ny fampiharana Android mahatalanjona sy maimaim-poana dia mitsidika hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Games, Action Tags Lalao 3D, Projet IGI, Projet IGI Apk Post Fikarohana
FB Tools Apk Download ho an'ny Android 
Hevitra 2 momba ny "Project IGI Apk Download ho an'ny Android "
May 20, 2021 amin'ny 3: 49 am
Sami igi samin dfa lavo
Novambra 17, 2021 amin'ny 7: 02 pm
Tsy apetraka ny lalao